बर्मामा नेपाली गायक गायिका दर्शक नचाउँदै, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बर्मामा नेपाली गायक गायिका दर्शक नचाउँदै
बैंकक। 'कर्म भए बर्मा गइन्छ' भनेझैं बर्मा पुगेर नेपालका प्रख्यात गायक अान्नद कार्की र गायिका इन्दिरा जाेशीले यहाका दर्शकलाइ नचायका छन्। गायक कार्की र जाेशीले महाशिवरात्रिकाे अघिल्लाे रातमा धुम मच्चाएका हुन्। कार्कीले नेपाली र हिन्दी गीत गाएका थिए। कार्कीले वनमा फूल्याे फूल, यी हल्लाहरु हुन् र नेपालस माया जस्ता गीत गाएका थिए।
बर्माकाे प्रख्यात संखाइ शिव धाममा शिवरात्रिकाे अघिल्लाे रात नेपाली गायक गायिककाले दर्शक नचायका हुन्। जाेशीले उध्रेकाे चाेली , मत त मर्छु कि क्या हाे ठूली, चाैवन्धी चाेली अनि राताे घाँघर जस्ता गीत गएका थिए।
शिवधाममा नेपाली गीत सुन्न बर्मा, थाइल्याण्ड र भारतीय दर्शक उपस्थित थिय। शिवरात्री मेलामा नेपाली गीत सु्न्न पाउँदा दर्शकले पटक पटक वान्स माेर बान्स माेर भनेका थिए।